Willian Borges oo diyaar u ah inuu iskaga tago Chelsea & Kooxda uu ku biiri karo oo durba la sii ogaaday – Gool FM
Willian Borges oo diyaar u ah inuu iskaga tago Chelsea & Kooxda uu ku biiri karo oo durba la sii ogaaday
Haaruun May 6, 2020
(London) 06 Maajo 2020. Willian Borges ayaa la soo warinayaa inuu diyaar u yahay inuu iskaga tago Kooxdiisa Chelsea, isagoo ku biiri kara naadiga ay ku xafiiltamaan Magaalada London ee Tottenham.
Kooxda Tottenham Hotspur ayaa lagu soo warramayaa inay ku guuleysan karto tartankii loogu jiro saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Chelsea ee Willian weliba heshiis beeca xorta ah.
Inkastoo ay muujiyeen rabitaan ah inuu laacibkan ku sii nagaado garoonka Stamford Bridge, mas’uuliyiinta kooxda ayaa ku guuldareystay inay u soo bandhigaan xiddiga reer Brazil heshiis ilaa iyo 2023-ka, waana shuruudaha looga baahan yahay haddii ay doonayaan inuu sii wado u ciyaarista naadiga Blues.
Xiddigan reer Brazil ayaa ku qanacsan inuu iskaga tago kooxda Chelsea, inkastoo ay horumarin la’aantu horseed u noqotay xiisaha meelo kale, kubbadsameeyahan ayaana hore u soo jeediyay inuu degayo London.
Sida laga soo xigtay beIN Sports, tani waxay dhalisay in Spurs ay si dhaqso leh ugu dhaqaaqdo si ay ugala xaajooto shuruudaha 31-sano jirkaan, kaasoo hore ugu soo hoos ciyaaray Tababaraha haatan ee Tottenham, Jose Mourinho.
Soo bandhigaha Richard Keys ayaa sheegay in Willian iyo Mourinho ay horay wadahadallo u yeesheen, kuwaasoo ku saabsan inuu ku soo biiri doono kooxda Tottenham.
William wuxuu dhowaan qiray inuu wali saaxiibo la yahay hoggaamiyaha Spurs ee Jose Mourinho, kaasoo hore u soo maamulay Kooxda Chelsea.
Si kastaba ha noqotee, laacibka reer Brazil ayaa kooxda Chelsea waayo fiican ku qaatay, isagoo kaga soo biiray naadiga Anzhi Makhachkala, wuxuuna kooxda u saftay 226 kulan, isagoo u dhaliyay 33 gool tan iyo markii uu ku soo biiray Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Chelsea.
Kooxda Real Madrid oo iska iibinaysa xiddigo ka mid ah si ay ula soo saxiixato Eduardo Camavinga
Manchester City oo dhiggeeda Manchester United kula tartamaysa saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Marseille